Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland Oo Tababar U Soo Xidhay 20 Tababare Oo Kooxaha Heerka 2-aad iyo 3-aad ah | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland Oo Tababar U Soo Xidhay 20 Tababare Oo Kooxaha Heerka 2-aad iyo 3-aad ah
Xidhiidhka kubadda cagta Somaliland ayaa caasimadda Hargeysa tababar sarre loogu qaadayo aqoonta macalinimo u soo gunnaanaday 20 tababare, kuwaas oo layliya kooxaha kubadda cagta heerarka 2-aad iyo 3-aad ee ka dhisan magaaladda Hargeysa. Tababarkan oo muddo 4 cisho ah socday ayaa xafladda xidhitaanka oo lagu qabtay Hoolka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, waxaana xubnaha tababarkan lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo buugaag casharadii ay tababarka ku qaateen ahaa, waxaana casharadda bixinayey macalinka weyn ee Axmed Cabdi Jaamac (Axmed Coach) oo ah muwaadin degan dalka Denmark.
Waxaa xafladda ka soo qeyb-galay Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Md. Maxamed Xuseen Dhabeeye, Agaasimaha waaxda ciyaaraha Mr. Maxamed Nuux Jibriil, Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Mr. Maxamed-Amiin Cabdi Cilmi, Guddoomiye ku-xigeenka Mr. Cabdicasiis Maxmed Jaamac, Macalinka tababarka bixinayey Mr. Axmed Cabdi Jaamac (Axmed Coach), xubnaha tababarka loo soo xidhay iyo marti-sharaf.
Ugu horeyn, waxaa halkaas ka hadlay Guddoomiye ku-xigeenka xidhiidhka kubadda cagta Mr. Cabdicasiis Maxamed Jaamac, waxaana uu sheegay in tabarakan uu xidhiidhku uga gol leeyahay sidii sarre loogu qaadi lahaa aqoonta masuuliyiinta tababareyaasha kooxaha kubadda cagta heerarka 2-aad iyo 3-aad ee caasimadda, waxaana uu xusay in tababarkani uu yahay wax-qabadkoodii ugu horeeyay, ayna xiggi doonaan tababaro kale oo aasaasi u ah kubadda cagta.
Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Md. Maxamed Xuseen Axmed (Dhabeeye) iyo Agaasimaha waaxda ciyaaraha Mr. Maxamed Nuux Jibriil oo halkaasi ka hadlay ayaa ku boggaadiyey xidhiidhka kubadda cagta tababarkan ay u qabteen macalimiinta kooxaha kubadda cagta caasimadda, waxaana sidoo kale ay uga mahad-celiyeen macalinkii tababarkan bixinayey Mr. Axmed Coach oo ah khabiir iyo macalin heer caalami ah, waxaana xubnihii tababarkan la siiyey ay ugu baaqeen in aqoonta la siiyey ay u gudbiyaan ciyaartoyda ay maamulaan.
Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Macalinka tababarkan bixinayey Axmed Coach, waxaana uu hoosta ka xariiqay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu tababar dhanka macinimadda kubadda cagta uu siiyo dhallinyaro da’yar ah, waxaana uu kula dardaarmay inay ka fogaadaan qabyaaladda iyo balwadaha ku xeeran isagoo u rajeeyay inay meel sarre ka gaadhaan aqoonta kubadda cagta.
Ugu dambeyntii, waxaa soo gunnaanaday Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Mr. Maxamed-Amiin Cabdi Cilmi Dixood, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaana uu ugu horeyn u mahad-naqaya Axmed Coach oo isagu si muwaadinimo ah iskugu xil-qaamay inuu wakhtigiisa u hibeeyo tababarna siiyo macalimiinta 20 kooxood ee heerarka 2-aad iyo 3-aad kubadda cagta ee caasimadda. Sidoo kale waxaan iyagana bogaadinaya wasaaradda ciyaaraha iyo xubnaha tababarka qaadanayey, runtii ka xidhiidh ahaan waxaa naga go’an inaanu sarre u qaadno aqoonta tababareyaasha oo iyagana laga rabo in juhdiga la gelinayo ay ka faa’iideystaan. Waxaanan idinkula dardaarmaya in aqoonta aad tababarkan ka hesheen oo buugaagta la idin siinayana idiinku qoran inaad ku celisaan oo aad ku maamushaan ciyaartoyda aad macalimiinta u tihiin” ayuu hadalkiisi ku soo koobay.
Gaba-gabadii hogaanka xidhiidhka kubadda cagta, Agaasimaha waaxda ciyaaraha ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey macalinkii tababarka bixinayey Mr. Axmed Cabdi Jaamac (Axmed Coach), sidoo kalena waxay iyagana shahaadooyinkii tababarka guddoosiiyeen 20-kii tababare ee tababarka u soo xidheen.